🥇 ukubalwa kwezimali nobude besikhathi sokusebenza
Ividiyo yokubalwa kwezimali nobude besikhathi sokusebenza
Oda ukubalwa kwezimali nobude besikhathi sokusebenza
Kukhona ibhizinisi elinjalo lapho i-accounting nesikhathi sokusebenza kwabasebenzi kuyindlela enkulu yokubala amaholo, ukuhlola ukusebenza kahle, ukukhiqiza. Ngakho-ke, abaphathi benza indlela yokulungisa ukuqala nokuphela kokushintsha, ukugcwalisa amafomu akhethekile, kepha uma kukhulunywa ngocingo, kuvela ubunzima bokuqapha. Kukhona kokubili indinganiso ethile yobude besikhathi sokusebenza nesikhathi esengeziwe sokusebenza, okufanele sikhokhwe ngokwesivumelwano sokuqashwa ngezinga elikhulisiwe. Lapho uchwepheshe enza imisebenzi buqamama, esuka ekhaya noma enye into, akunakwenzeka ukubheka ukuthi ubenzani usuku lonke nokuthi imisebenzi yenziwe kahle yini ngoba ubuchwepheshe besimanje buyasiza. Nge-freeware accounting, zonke izinqubo zenzeka ngendlela ye-elekthronikhi, kanti ezinye zazo zisebenzisa i-Intanethi, enweba amathuba okusebenzisa i-freeware, ukuyisebenzisa kuzo zonke izindawo zomsebenzi. Sincoma ukuthi unake intuthuko enganikeza indlela edidiyelwe ye-automation ukuze utshalomali luzokhokha ngokushesha futhi imbuyiselo ibe phezulu.
Ochwepheshe be-USU Software bebelokhu benza isoftware ezindaweni ezahlukahlukene zebhizinisi ngokweminyaka eminingi, okunikeza ukuqonda ngezidingo zamanje. Ipulatifomu ethuthukile yohlelo lwe-USU Software iba yisisekelo sokwakha iphrojekthi, ngoba ivumela ukulungisa okuqukethwe kwesixhumi esibonakalayo, kwakha ukusebenza okuhlukile okuhambelana nenkampani yakho. Awutholi isixazululo esishaywayo esikuphoqa ukuthi ushintshe ukwakheka kwesikhathi sokusebenza nesigqi, okusho ukuthi ngeke kudingeke uchithe isikhathi ukujwayela insimbi entsha. Uhlelo luziqhenya ngesikhashana esifushane sokuqeqeshwa kubasebenzisi, noma ngabe bahlangana okokuqala nesisombululo esinjalo. Ochwepheshe bethu bachaza imigomo eyisisekelo, izinzuzo, kanye nezinketho ngamahora ambalwa nje. Ama-algorithms amiswa ngokushesha ngemuva kwesigaba sokuqalisa, kucatshangelwa ama-nuances wemisebenzi, izidingo zosomabhizinisi nabasebenzi, okuzokuvumela ukuthi wenze imisebenzi ngaphandle kokuphambuka emithethweni ebekiwe, unciphise amaphutha. Ukubalwa kwesikhathi sokusebenza kwenziwa ngokuzenzakalela, ngokuya ngohlelo lwangaphakathi noma amanye amapharamitha.
Amandla wokucushwa kwe-freeware kwe-USU Software akhawulelwe ekuqapheni ubude bemisebenzi, ushintsho lomsebenzi. Iba isixhumanisi sabo bonke abasebenzisi, ihlinzeka ngemininingwane yolwazi esesikhathini, oxhumana nabo, amadokhumenti. Uchwepheshe ngamunye uthola isikhala somuntu ngamunye enza imisebenzi yakhe yesikhathi sokusebenza, lapho angenza khona ngokwezifiso ukuhleleka okuhle kwamathebhu nokwakheka okubukwayo. Okwezimali ezifanele nesikhathi sobude besikhathi sokusebenza, abasebenzi basehhovisi nabasebenza kude, futhi imodyuli yokulandelela efakwe ngokungeziwe isetshenziswa kumakhompyutha. Ngasikhathi sinye, inhloko noma inhloko yomnyango ithola izibalo ezenziwe ngomumo noma umbiko, okhombisa lonke ulwazi ngemisebenzi yabasebenzi, kubandakanya nemisebenzi eqediwe, amahora esikhathi sokusebenza asetshenziswe kulokhu. Isistimu yokubalwa kwemali ilandelela ubude bezikhathi zomsebenzi nobudlabha, kwakheka igrafu ebonakalayo, enekhodi. Ukubandakanya ukuthuthuka kwethu ku-accounting kusho ukuthola umsizi othembekile kuzo zonke izindaba.
Ikhono lokwenza ngendlela oyifisayo isicelo sezicelo zamakhasimende likwenza kube inketho engcono kakhulu ngokuya ngokwenza izinqubo ezahlukahlukene.
Sinikeza amakhasimende ethu ithuba lokukhetha okuqukethwe okusebenzayo, okusetshenziswa ngokushintsha isethi yezinketho kusixhumi esibonakalayo. Isakhiwo se-laconic semenyu sivumela ukulufunda kahle uhlelo ngesikhathi esincane futhi kungabi nobunzima ekusebenzeni kwansuku zonke. Ukwaziswa kwabasebenzi kwenzeka ngendlela ekude futhi kudinga amahora ambalwa ngokoqobo, bese kuqala isigaba esifushane sokujwayelana ngokoqobo.
Izindleko zesoftware zilawulwa ngokuqukethwe okukhethiwe kokusebenza futhi kungangezelelwa njengoba kudingeka.
Ekuhambeni komsebenzi ngakunye, i-algorithm ethile yezenzo iyalungiswa, ezobavumela ukuthi igcwaliswe ngesikhathi futhi ngaphandle kwezikhalazo. Isikhathi sokushintshwa kochwepheshe siyarekhodwa futhi sikhonjiswe kumagazini we-elekthronikhi ngokuzenzakalela, kusiza ezinye izenzo zomnyango wezokubala imali. Ukubalwa kwamaholo, izintela, izindleko zezinsizakalo nezimpahla kusheshe ngenxa yokusetshenziswa kwamafomula kagesi kwanoma yikuphi ukubanzima. Ukubalwa kohlelo kwemisebenzi yabasebenzi abakude kwenziwa ngesisekelo sokubhaliswa okungapheli kwezenzo, izicelo ezifakiwe, imibhalo. Awudingi ukuqapha njalo abaqaphi babasebenzi, ungamane uvule isithombe-skrini sesikhathi esidingekayo, sidalwa njalo ngeminithi. Izibalo nezibalo eziboniswe emibikweni esezenziwe zasiza ekuhloleni inqubekela phambili yamanje ekusetshenzisweni kohlelo, nokwenza izinguquko uma kudingeka.
Abaholi, abaphathisa ukuphatha uhlelo lwe-USU Software, bakwazi ukunikela ngemizamo eminingi ezindaweni ezinjengokwandisa ukubambisana, ukuthola abalingani, amaklayenti.
Kuphela labo ababhaliswe ku-database abakwazi ukusebenzisa uhlelo lokusebenza, ukufaka iphasiwedi kanye nokungena ngemvume kokuhlonza njalo lapho bengena. Ayikho indlela yokunqanda izinkinga zehardware, kepha ukwenza isipele njalo kukusiza ukuthi uthole idatha yakho.
Ukuze usebenzise uhlelo lokusebenza, udinga amakhompyutha alula, asebenzisekayo, ngaphandle kwamapharamitha wesistimu akhethekile. Yebo, uzwe kahle, asikho isidingo sokufaka noma sokuthenga noma yini ngaphandle kwekhompyutha. Ukubalwa kwezimali nobude besikhathi sokusebenza kuyinqubo edingekayo nedingekayo. Usebenzisa uhlelo lwe-USU Software accounting uzohlala uqiniseka ngabasebenzi bakho nemisebenzi yabo yesikhathi sokusebenza.